Dagaallo rajo iyo shaki labadaba dhaliyey ee ka soo cusboonaadey koonfurta soomaalia - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shariif Shiikh Axmed hogaamiyaha maxkamadaha islaamiga ee Muqdisho
Dagaallo rajo iyo shaki labadaba dhaliyey ee ka soo cusboonaadey koonfurta soomaalia
Publicerat måndag 26 juni 2006 kl 13.36
Dagaal culus ayaa ka qarxay aaga hore ee ay isku horfadhiyeen ciidmada isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyo ciidamda Maxaakimta islaamiga ah.
Dagaalkaasi oo xalay habeennimadii ka bilowday meel 15 Km dhanka degmada Balcad ka xigta Magaalada Jawhara ayaa waxaa ciidamda isbahaysiga iyo kuwa shabeellada dhexe lagu soo caabiyay dhanka magaalda Jawhar.
Ciidamadda maxaakiimta ayaa la sheegey iney gacanta ku dhigeen magaalada Jowhar iyada oo aan la garaneyn halka ay u baxsadeen wixii ka haray ciidamadii isbahaysiga hogaamiye kooxeedyada iyo madaxdoodiiba.
Maxamed Dheere, Cabdi Waal, Bootaan Ciise Caalim iyo Maxamed Qanyare Afrax ayaa ku sugnaa magaalada Jowhar intii aannu dagaalku qarxin iyagoo Jowhar shalay kasoo diray maleeshiyooyin abaabulan oo ka hortaga Maxakamadaha.
”Dhaqdhaqaaqani waa mid ka gadoodsiiyey shacbiga, 16 sannadood kadib oo ey ku hoos jireen – dhac, afduub iyo dil. Middaasina oo imnka laga gudbey. Hadda waxaa talada iska leh shacbiga sidii ey uga tashan lahaayeen aayahooda!” Waxaa sidaasi sheegey madaxa maxkamadaha islaamiga ee Muqdisho Shariif Shiikh Axmed, mar uu u warramayey idaacadda leyska daawado ee BBC-da. Wax ka yar kahor intii aannu ku dhawaaqin in dagaalkii muqdisho ey ku gacan sarreeyeen.